Beddelka Weyn iyo Bluelock | Martech Zone
Dhowr toddobaad ka hor ayaan bilaabay inaan akhriyo The Switch Big by Nicholas Carr. Waa kuwan qayb ka mid ah bogga ku dhintay:
Boqol sano ka hor, shirkaduhu waxay joojiyeen inay ku soo saaraan awooddooda matoorro uumiyaal iyo firfircooni waxayna ku xirmaan shabakadda korontada ee dhawaan la dhisay. Awoodda raqiiska ah ee ay soo saaraan korontada korontadu kaliya ma badalin sida ganacsiyada u shaqeeyaan Waxay dejisay falcelin silsilad ah oo ku saabsan isbeddellada dhaqaale iyo bulsho ee keenay dunida casriga ah ee jiritaanka. Maanta, kacaan la mid ah ayaa socda. Ku xirnaanta shabakadda xisaabinta caalamiga ah ee internetka, warshado badan oo ka baaraandegidda macluumaadka ayaa bilaabay inay ku daadiyaan xogta iyo koodhka barnaamijyada guryahayaga iyo ganacsiyadayada. Markan, waa xisaabinta oo isu beddelaysa koronto.
Isbeddelka ayaa mar hore dib u cusbooneysiinaya warshadaha kombiyuutarka, keenaya tartamayaal cusub sida Google iyo Salesforce.com oo horay u soo saaray hanjabaadna u ah halyeeyada sida Microsoft iyo Dell. Laakiin saameyntu way sii fogaan doontaa. Qiimo jaban, kumbuyuutar ay soo saaraan koronto ayaa ugu dambeyntii bulshada u beddeli doonta si qoto dheer sida koronto jaban ay u sameysay. Waxaan horeyba u arki karnaa saameynta hore? wareejinta xakamaynta warbaahinta ee hay'adaha loona wareejiyo shaqsiyaadka, doodaha ku saabsan qiimaha asturnaanta, dhoofinta shaqooyinka shaqaalaha aqoonta, xitaa marka ay sii kordhayso xoolo urursiga. Markay korantada macluumaadka sii ballaariso, isbeddelada ayaa sii ballaadhi doona oo keliya, iyo xawaaraha ay ku soconayaan oo keliya ayaa la dedejinayaa.
Beddelka Weyn durba waa xaqiiqo. Bishii Janaayo, Wadada ayaa u wareejineysa kaabayaasha wax soo saarkeena Buluug. Waa adduun cusub (sida xayeysiintu dhinaca bidix uga tiraahdo).
Waa bogaadintii ugu fiicneyd ee Softwareka Adeeg ahaan (Saas). Shirkadaha SaaS ee aan u shaqeeyay waxay had iyo jeer ku miisaamaan miisaanka qalabka iyo kooxaha dadka si ay u taageeraan. Bluelock waa xalka saxda noo ah maadaama aan kobcin karno ganacsigeena adoon ka welwelin kaabayaashayada ama ilaha ballaaran ee la socda. Waxay ku wareejineysaa welwelka!
Kaabayaasha Adeeg ahaan (IaaS) waa qaab ganacsi oo soo baxaya oo kuu oggolaanaya inaad ka iibsato ilaha IT-ga bixiyaha IaaS iyadoo ah kharash go'an bil kasta. IaaS, halkii aad ka iibsan laheyd kumbuyuutar iyo SAN, waxaad kireysan kartaa lixdan processor-ka ah, laba terabytes oo keyd ah iyo lixdan iyo afar gigabytes oo xusuus ah waxaadna ku bixin kartaa bil kasta ama seddexdii biloodba. Degaankani waa sida saxda waxa Nicholas kula hadlayo buugiisa. Waxaan soo iibsaneynaa xawaare dhan, meesha diskiga ah iyo awoodda wax lagu farsameeyo sida haddii aan iibsaneyno koronto kale.
Inta badan iibiyeyaasha IaaS way shaqeeyaan VMWare ama nidaam hawlgal oo la mid ah kan awood u siinaya u shaqeynta. Nidaamkan nidaamka qalliinka ayaa fure u ah in la dhex dhigo shaashadda u dhexeysa qalabka iyo deegaankaaga taas oo u oggolaaneysa inuu miisaamo, dhaqaaqo, la koobi karo, iwm.
Waxaan sameyneynaa Beddelka Weyn dhammaadka Janaayo. Soo qaado nuqul ka mid ah buugga oo sii wicitaan Bluelock.
PS: Kani maahan qoraal la kafaala qaaday… waa wax aan doonayay inaan la wadaago maxaa yeelay aad ayaan ugu faraxsanahay ku dhaqaaqista!
Tags: Ujeedadadabkasaac 1981kim dotcommegauploadsxafaayadburcad-badeednimadaburcad badeedbudhcad badeedxatooyo
23, 2007 at 12: 14 AM
Laakiin BlueLock waxay umuuqataa inuu yahay shirkad kafaala qaade…
Sikastaba, maxaad uxuseysaa BlueLock oo aadan xusin Amazon's EC2, S3, iyo SimpleDB?
23, 2007 at 11: 31 AM
Bluelock ma bixineyso boostada ama booska kafaala qaadka. Waxaan siiyaa qaar ka mid ah asxaabteyda iyo asxaabteyda meelaynta qadarinta mararka qaarkood. Malaha waa inaan ku magacaabaa "Asxaabta & Damaanadqaadayaasha".
Bluelock sidoo kale wuxuu ku yaal Indiana - waad arki doontaa inaan isku dayo inaan ka caawiyo bilowga Indiana iyo shirkadaha teknolojiyadda.
Adeegga Amazon ma ahan Kaabe ahaan Adeeg ahaan, waa Adeegyada Webka. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in deegaankeygu uusan ka soo jiidanayn 'daruur' (ereyga Amazon) halkaasoo jawigayga lala wadaago boqollaal ama kumanaan kale.
Iyadoo Bluelock waxaan lahaan doonnaa adeegeyaal heersare ah, disk disk, processor-yada iyo xawaaraha xawaaraha. Waxaan ku jirnaa jawi dhaqan wanaagsan - sidaa darteed waxaan ku soo celin karnaa bey'adeenna markii loo baahdo.
Waxaan dammaanad ka qaadnay SLA-ga, u-hoggaansanaanta Amniga Heerka Warshadaha, gidaarrada dab-demiska, ogaanshaha soo-gelinta, marin u helidda qalabka, kontoroolka 24/7 iyo taageerada, keydadka khasnada ah, awoodda xad-dhaafka ah… waad ku magacowday.
Rajaynaynaa in kaa caawinaysaa! Eeg Buluug wixii macluumaad dheeraad ah.
23, 2007 at 12: 05 PM
Kadib dib u eegistaada dhalaalaysa, laga yaabee in BlueLock ay noqoto kafaala qaade paying 😉
@Douglas: Caawinta Indiana
Waan fahamsanahay, isla sidaas ayaan ku sameeyaa Atlanta, GA (eeg http://web.meetup.com/32/)
@Douglas: Amazon ma ahan adeeg kaabe
Inkasta oo aysan isku heer ahayn BlueLock, laakiin waa EC2 maaha kaabayaasha dhaqaalaha?
23, 2007 at 11: 20 AM
@Mike Waxaa jira iskudhaf udhaxeeya waxyaabaha la bixiyo ee Amazon EC2 / S3 / SimpleDB iyo BlueLock. Laakiin guud ahaan markay hadlayaan, waxay yihiin xalal badan oo kala duwan, waxayna bartilmaameedsanayaan dhagaystayaal kala duwan.
Ma sameyn kartid koox-kooxeedka Amazon adiga oo aan lahayn qaddar aqooneed oo farsamo, waxaadna u baahan laheyd inaad sameysid wax aad ku maamusho xaaladaha kala duwan ee EC2. Waxa kale oo aad la kulantay dhibaatooyin badan oo u baahan in lagu xalliyo arjiga, sida xaqiiqda ah in dhacdooyinka EC2 aysan lahayn IP-yada ma guurtada ah, in aysan jirin keyd maxalli ah oo ku saabsan tusaale ahaan EC2, in keydka S3 uu aad uga hooseeyo SAN ama diskka deegaanka, iyo in SimpleDB aysan aqbalin weydiimaha SQL ama aysan u oggolaanin ku biirista adag. EC2 iyo SimpleDB wali waxay kujiraan beta hadda (kan dambe ee beta gaar ah), markaa ma jiraan wax SLAs ah - ma ahan wax sax ah oo aad ubaahantahay inaad ku xidho ganacsigaaga wax soo saarka muhiimka ah.
BlueLock asal ahaan waxay ku siineysaa hoos-u-dhigis loogu talagalay rakibaadda Windows iyo / ama Linux server iyada oo aan madax-xanuun maareynin, ama dib-u-injineernimada dalabkaaga si loogu martigaliyo Amazon. Waxaad sidoo kale lahadli kartaa injineerada taageerada taleefanka.
Taasi waxay tiri, Amazon waa wax aad uga qaalisan in lagu bilaabo, BlueLock waxaa laga yaabaa inaysan noqon doonin mid wax ku ool ah haddii aad kaliya socodsiineyso dhowr server. Sidoo kale waa lacag-u-isticmaal ahaan, halka qiimeynta BlueLock ay u eg tahay xarumaha xogta dhaqameed ee aad dejiso qorshe aad ku bixinayso qadar cayiman oo ah cpu / disk / bandwidth / iwm haddii aad isticmaasho ama aad wada isticmaasho bil kasta.
Afeef: Waan ogahay dad yar oo ka shaqeeya BlueLock. Laakiin waxaan si firfircoon u isticmaalayaa Amazon S3 wax soo saarka, waxaan ahay taageere weyn oo EC2 ah (kiisaska saxda ah), waxaanan si xamaasad leh u sugayaa martiqaadkeyga beta ee khaaska ah ee SimpleDB.
23, 2007 at 12: 08 PM
Waad ku mahadsantahay faallooyinka Cade. Waxaan weydiin lahaa Douglas inuu qoro qoraal isbarbar dhiga iyo isbarbar dhiga BlueLock adeegyada websaydhka ee Amazon laakiin imika uma baahnin sidii aad horeyba u sameysay!
PS Ma waxaad tihiin reer Hindiya runti ma isku dheggan tihiin, doncha? 🙂
23, 2007 at 12: 21 PM
Ha! Haa waan hubnaa inaan sameyno, Mike!
Waa mid ka mid ah gobolladaas in yar oo ku filan inay jiraan darajooyin aad u yar oo kala-saarista u dhexeeya 2 shirkadood ama dad ah. Waxaan si adag isugu dayaynaa inaanu xoojino xiriiriyadan isla markaana aan u abaabulno gobol ahaan sidoo kale.
Waa gobolka ugu fiican ee lagu bilaabayo shirkad tiknoolaji ah maaddaama qiimaha nolosha iyo faa'iidooyinka canshuurtu aad u fiican yihiin. Marka loo fiiriyo qaran ahaan, waa 20% kharash ka yar celcelis ahaan. Taasi waa ereyga aan u baahan nahay inaan ka baxno! Mawqifka MidWest ee ku wajahan shaqada adag iyo adeeg weyn waa farqi weyn sidoo kale.
Yar Indiana waa shabakad bulsheed cusub oo loo bilaabay inay si fiican u abaabusho ganacsiyada gobolka.
PS: Waan ku faraxsanahay in Cade uu talaabadaas qaaday. Waxaan u guureynaa Bluelock sidaa darteed maahan inaan ogaado dhamaan khilaafaadka 😉
23, 2007 at 12: 42 PM
@Douglass: Waa gobolka ugu fiican in la bilaabo shirkad tiknoolaji ah maaddaama qiimaha nolosha iyo faa'iidooyinka canshuurtu aad u fiican yihiin. Marka loo fiiriyo qaran ahaan, waa 20% kharash ka yar celcelis ahaan. Taasi waa erayga aan u baahan nahay inaan ka baxno! Mawqifka MidWest ee ku wajahan shaqada adag iyo adeeg weyn waa farqi weyn sidoo kale.
Laakiin markaa waa inaad ku noolaataa Indiana godforbid…. (waan ka xumahay, ma diidi kari - ')
Sikastaba ha noqotee, waxay u egtahay sidaad u wici laheyd Rugta Ganacsiga oo ah wakiilkaaga xiga… 🙂
23, 2007 at 1: 55 PM
Waad ku mahadsan tahay xisaabinta sida mowqifka korantada. Waxay macno badan samaynaysaa isla markaaba IaaS ayay u dhigaysaa aragti. Waan ku qanacsanahay boostada xitaa daaweynta gaarka ah ee Bluelock :).
Post fiican Doug.
Ciid wanaagsan dhammaan.